फेसबुक लाइभमा नेपाल भाषा सिकाउँदै पूर्व मिस नेवाः :: Setopati
फेसबुक लाइभमा नेपाल भाषा सिकाउँदै पूर्व मिस नेवाः
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, वैशाख १७
के तपाईंलाई नेपाल (नेवार) भाषा सिक्ने मन छ? फर्रर बोल्न नजाने पनि कम्तिमा अरूले बोलेको बुझ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ?
छ भने तपाईं घरै बसी-बसी नेपाल भाषा सिक्न सक्नुहुन्छ।
पूर्व मिस नेवाः सुनिता डंगोलले यही वैशाख १ देखि हरेक साँझ ६ः३० बजे निजी फेसबुकबाट नेपाल भाषा सिकाउँदै छिन्। उनको कक्षा फेसबुक लाइभबाट सञ्चालन हुन्छ।
सुनिता यसअघि रञ्जना लिपि सिकाउँथिन्। उनीसहितको 'क्यालिजात्रा' टोलीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यशाला गरेर रञ्जना, नेपाल र देवनागरी लिपि सिकाउँदै आएको थियो। कोरोना महामारी र लकडाउनले उनीहरूको काममा 'ब्रेक' लाग्यो।
त्यसको केही दिनपछि उनलाई आइडिया आयो- लकडाउन बेला घरै बसेकाहरूलाई 'भर्चुअल' माध्यमबाट किन नसिकाउने?
अरूले यो आइडिया मन पराएपछि उनले फेसबुक लाइभबाट रञ्जना लिपि सिकाउन थालिन्। सुरूमा एक साताको कार्यशाला चलाउने उनको योजना थियो। लकडाउन लम्बिँदै गएपछि लिपि कक्षाकै सहभागीहरूको आग्रहमा नेपाल भाषा सिकाउन सुरू गरेको उनी बताउँछिन्।
'खाली बसुँजस्तो कहिल्यै लाग्दैन, लकडाउन बेला केही न केही सिर्जनशील काममा हात हालुँ भनेर फेसबुक लाइभ चलाएको हुँ,' उनले भनिन्, 'सुरूमा नेपाल भाषा सिकाउने योजना थिएन। आफूले पहिल्यैदेखि सिकाउँदै आएको रञ्जना लिपिको कक्षा मात्र चलाउँछु भन्ने सोचेकी थिएँ।'
उनको कक्षामा एकातिर मातृभाषा नजानेका नेवारहरू सहभागी छन् भने नेपाल भाषा सिक्न इच्छुक गैरनेवार पनि छन्।
सुनिताको पढाउने रहर पुरानै हो। उनी स्कुल पढ्दादेखि नै कक्षामा सिकेका कुरा घर आएर आफ्ना बुवालाई पढाउने गर्थिन्। यही बानीले विभिन्न सामाजिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएकी छन्। 'क्यालिजात्रा' वर्कसप त्यसैमध्ये एक हो।
उनले भाषा कक्षाको सुरूआत साधारण बोलीचालीबाट गरिन्। नेपाल भाषा झट्ट सुन्दा एउटै लागे पनि कतिपय शब्द र उच्चारण ठाउँअनुसार फरक छ। काठमाडौं र भक्तपुरमै बोलिने भाषा एउटै छैन। बाहिर त झन् धेरै विविधता पाइन्छ। उनको फेसबुक लाइभमा नेपाल भाषाको विविधताबारे अन्तर्क्रियासमेत हुन्छ।
उनको कक्षा व्यवस्थित छ। जसरी नेपाली वा अंग्रेजी सिकाउँदा अक्षर, शब्द र वाक्य हुँदै पद, कारक, विभक्ति, क्रियापद लगायत पढाइन्छ, उनले यही विधि नेपाल भाषा कक्षामा प्रयोग गरेकी छन्। यसैअनुसार हरेक दिन आफ्नो कक्षालाई फरक-फरक शीर्षक दिने गरेकी छन्।
'सुरूका दिन किताबबाट शीर्षक चयन गर्थें,' उनले भनिन्, 'अहिले शीर्षक चयनमा गुरू अनिल स्थापितको सहयोग पाइरहेको छु।'
उनी फेसबुक लाइभमा पनि चार्ट-पेपरमा मार्करले लेखेर पढाउँछिन्। यसबाहेक विभिन्न स्टिकर र इमोजीको खुब प्रयोग गर्छिन्। यसमा उनका साथी आनन्दकुमार महर्जन र विज्ञान प्रजापतिले मद्दत गरिरहेका छन्। उनीहरू नेपाल भाषाका स्टिकर तथा फेसियल इमोजी बनाउँछन्। शीर्षक सुहाउँदा पात्र सिर्जना गर्छन्।
यसरी ग्राफिक रूपमा सिकाउने विधिले उनको कक्षा सहज र रमाइलो हुने गरेको सहभागीहरूको अनुभव छ।
लकडाउन लम्बिँदै गए आफूसँग भएका मार्कर र पेपरले नपुग्ला भन्ने उनलाई चिन्ता छ। बेलाबेला इन्टरनेटले पनि दु:ख दिने गरेको उनी बताउँछिन्।
उनको कक्षा झन्डै एक घन्टा चल्छ। यसको निम्ति दिनको तीनदेखि चार घन्टा तयारी गर्नुपर्छ। सुरूको तयारी त अझै बढी हुन्थ्यो। 'लकडाउन अवधिभर हामी यो लाइभ जारी राख्नेछौं। त्यसपछिको योजना भने सोचेका छैनौं,' उनले भनिन्।
सुनिताले केही दिनदेखि फेसबुक लाइभको भिडियो युट्युबमा राख्न थालेकी छन्। धेरै दर्शकले युट्युबमा भिडियो हालिदिन आग्रह गरेपछि 'अपलोड' गरेको उनी बताउँछिन्।
'दर्शकको सकारात्मक प्रतिक्रियाले हौसला मिलेको छ,' उनले भनिन्, 'नेपाल भाषा पढ्न र बुझ्न पाउँदा धेरैले सन्तुष्ट भएको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। मलाई पनि लकडाउनको समय सदुपयोग गरिरहेको छु भन्ने लागेको छ।'
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १७, २०७७, ०४:४३:००